Enweghị mgbochi ndị ọzọ na Florida na COVID-19 kwupụtara akụkọ ihe mere eme site n'aka Gov. DeSantis
Home » Njem njem » Enweghị mgbochi ndị ọzọ na Florida na COVID-19 kwupụtara akụkọ ihe mere eme site n'aka Gov. DeSantis
Ndị bi na Florida nwetagoro nnwere onwe ha, ka ọ bụ oku a maka Gọvanọ Ron DeSantis kpọrọ igbu onwe ya.
Taa, Gọvanọ Ron DeSantis sonyeere ndị omebe iwu mpaghara na ndị nwe obere azụmaahịa na St.
The bill takes aim at arbitrary lockdowns, vaccine passports, and enhances emergency preparedness for future emergencies.
Gọvanọ DeSantis bịanyere aka na Iwu Iwu 21-101 na 21-102 na-akwụsịtụ iwu niile gbasara mberede na mpaghara ruo mgbe July 1, 2021, bụ mgbe iwu obodo ga-abụ nke na-enweghị isi kpamkpam na-agbaso SB 2006
Mgbe Florida dere 3075 karịa ọrịa COVID-19 na 38 ndị ọzọ nwụrụ, Gọvanọ nke Sunshine State nwere oke. Otutu ndi mmadu na anwu n’India n’ime uwa jikotara aka. Florida bụ ụzọ dị mkpa maka njem, ọkachasị site na South America, ebe nje a na-atụgharị na-agbasa.
Munich Oktoberfest kagburu ọzọ gbasara ọrịa na-efe efe COVID-19
Akụkọ banyere njem China
Mbugharị China'sbọchị ezumike nke China na-esetịpụrụ ihe ndekọ ọhụrụ
Njikọ Mkpakọrịta Akụkọ
US Travel na enweta mmiri Nicole Porter iji kwalite mgbasa ozi ndọrọ ndọrọ ọchịchị
Kazakhstan njem njem
Kazakhstan na-agbatị oge ịkwụsịtụ maka enweghị ikike visa maka ụmụ amaala nke mba 54
Onsrụ Ọrụ Dịịrị Tourism News
Nnukwu ule COVID-19 na-akwụ ụgwọ nwere ike ịkwụsị mgbake njem mba ụwa